နှလုံးသားထဲက ပုဂံ - LODGGY
ပုဂံကို (နိုင်ငံတစ်ခုအသွင်) ခရစ်နှစ် ၁၀၇ ခုနှစ်မှာ စတင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ ခုဆို နှစ်ပေါင်း ၁၉၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ အနော်ရထာမင်းကြီးရဲ့ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အေဒီ ၁၀၄၄ – ၁၀၇၇ တည်ထောင်စဉ်က ပုဂံဟာ သာသနာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအရှိန်ကောင်းခဲ့တဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၂ ရာစုကတော့ ပုဂံရဲ့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးအချိန်တွေပါပဲ။ သဗ္ဗညုလို၊ ရွှေဂူကြီးလို၊ ဓမ္မရံကြီးလို၊ စူဠာမဏိလို၊ ကန်တော့ ပလ္လင်လို စေတီတော်ကြီးတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တော့တာပါ။
ပုဂံခေတ်အစကတော့ အေဒီ (၂) ရာစု၊ သရေခေတ္တရာအပျက်တွင် သမုဒ္ဒရာဇ်မင်းသည် နောက်လိုက်ဗိုလ်ပါများနှင့်တကွ မိမိတို့ အမျိုးအနွယ်တူများရှိရာ ယခုပုဂံပြည်တည်ရာအရပ်သို့ဆန်တက်ခဲ့ပြီးထီးနန်းစိုက်ထူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာဇ်မင်းကစလို့ မင်းပေါင်း ၅၅ ပါး အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမင်းကတော့ စောမွန်နစ်ပါ။ စောမွန်နစ်လက်ထက်မှာ ပုဂံပျက်သုန်းခဲ့ပြီး ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ စစ်ကိုင်း စတဲ့ မြို့တော်တွေ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
အနော်ရထာမင်းနဲ့ မင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်တွေဖြစ်တဲ့ စွယ်တော်လေးဆူက ပုဂံရောက်ရင် မဖူးမဖြစ်ဘုရားတွေပါ။ စွယ်တော်လေးဆူက ပုဂံရဲ့ ထောင့်တစ်နေရာစီမှာရှိနေပြီးတော့ ပုဂံရဲ့ စေတီပုထိုးအများစုကလည်း စွယ်တော်လေးဆူရဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာပဲ တည်ရှိနေတာပါ။ လောကနန္ဒာဘုရားက မြို့သစ်မှာ၊ ရွှေစည်းခုံဘုရားက ညောင်ဉီးမြို့ပေါ်၊ တုရင်တောင်ဘုရားက ညောင်ဉီးမြို့ အထွက်နားနဲ့၊ တန့်ကြည်တောင်ဘုရားကတော့ ဧရာဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတွေကတော့ နေမွန်းမတည့်မှီ ဘုရားလေးဆူလုံးဖူး၊ တူညီတဲ့အလှူနဲ့ တူညီတဲ့ ဆုတောင်းရင် ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
အာနန္ဒာဘုရား (အေဒီ ၁၁ ရာစု) ရှေးခေတ်ဗိသုကာလက်ရာတွေ၊ နံရံဆေးပန်းချီတွေကို မြင်တွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့ အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်မင်းတို့ရဲ့ ပုဂံပြည်ကြီးခေတ်ကောင်းခဲ့စဉ်အချိန်က ဘယ်လောက်တောင်ကြီးကြယ်ခမ်းနားခဲ့မလဲဆိုတာ မှန်းဆကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အနုမှာ အာနန္ဒာ ဆိုသည့်အတိုင်း ကျန်စစ်သားမင်းကြီး၏ ကောင်းမှုတော် အာနန္ဒာစေတီတော်ကြီးမှာတော့ ရှေးခေတ်ဗိသုကာလက်ရာတွေ၊ ဗုဒ္ဓဝင်ကျောက်ဆစ်လက်ရာများနဲ့ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ထို ဗုဒ္ဓဝင်ကျောက်ဆစ်လက်ရာများ မှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ သမိုင်းတွင် ယနေ့ ခေတ် အထိ ကျန်ရစ်သမျှ ဗုဒ္ဓဝင် အပြည့်အစုံ ကျောက်ဆစ်လက်ရာများတွင် အစောဆုံးနှင့် အပြည့်အစုံဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ပုဂံဘုရားတွေကတော့ တစ်မျိုးတစ်ဘာသာစီထူးခြားနေတာချည်းပဲဖြစ်သည်။ ညဏ်တော်အမြင့်ဆုံးစေတီဖြစ်သည့် သဗ္ဗေညု၊ ထုထည်အကြီးဆုံး ဓမ္မရံကြီး၊ အနုမှာအာနန္ဒာ၊ တန်ခိုးမှာ ရွှေစည်းခုံ၊ ထီးလိုမင်းလို၊ မနူဟာဘုရား၊ မြစေတီ၊ ရွှေဂူကြီး၊ စူဠာမဏိ၊ ဂူပြောက်ကြီး၊ အပယ်ရတနာ၊ ဗူးဘုရား၊ စိုးမင်းကြီးအုတ်ကျောင်း၊ ဓမ္မရာဇိကဘုရား၊ ငှက်ပစ်တောင်ဘုရား၊ အလိုတော်ပြည့်၊ နဂါးရုံဘုရား စသဖြင့် ဘုရားတွေကတော့ ပုဂံရောက်ရင် မဖြစ်မနေဖူးကြတဲ့ဘုရားတွေပါ။ ဓမ္မရံကြီး၊ စူဋ္ဌာမုဏိ စေတီတွေမှာတော့ ပုဂံခေတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအုတ်စီလက်ရာတွေကို တွေ့ရမှာပါ။
ပုဂံအကြောင်းပြောရင် နံရံဆေးရေးပန်းချီအကြောင်းက မပါမဖြစ်ပါပဲ။ ဂူဘုရားတွေအတွင်းမှာ ဇာတ်နိပါတ်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဝင်၊ ဘုရားရုပ်ပုံ နံရံဆေးပန်းချီတွေကို တွေ့မြင်ကြမှာပါ။ အာနန္ဒာဘုရား၊ ဘုရားသုံးဆူ၊ ဂူပြောက်ကြီး (မြင်းကပါ)၊ ဂူပြောက်ကြီး (ဝက်ကြီးအင်း)၊ အပါယ်ရတနာဘုရား၊ နဂါးရုံဘုရား၊ လောကထိပ်ပန်၊ စူဋ္ဌာမဏိ၊ မြင်းပြဂူစေတီ၊ ပုထိုးသားများဘုရား၊ ဖြတ်စရွှေဂူ တို့ကတော့ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေကို လေ့လာလို့အကောင်းဆုံးဘုရားတွေပါ။ လောကထိပ်ပန်ဘုရားမှာဆို မဟော်သဓာဇာတ်တော်နှင့် ဗုဒ္ဓဝင်ကို တခမ်းတနားရေးဆွဲထားပြီး ပုဂံခေတ်ဘုရင်၊ မိဖုရား၊ မှုးကြီးမတ်ရာတို့ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဂူပြောက်ကြီး (မြင်းကပါ) မှာဆိုရင်လည်း အကောင်းပကတိကျန်ရှိနေသေးသော ပုဂံခေတ် နံရံဆေးရေးများတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ တာဝတိသာနတ်ပြည်မှာ ဆင်းသက်တော်မူခန်း၊ သင်္ဂါယနာတင်မှတ်တမ်းများ၊ တိတ္ထိတို့အားတန်ခိုးပြခန်း၊ လင်းနို့ငါးရာအား တရားဟောခန်း စသည့်ထူးခြားပြီး ရှားပါသည့် ဗုဒ္ဓဝင်များကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါတယ်။
ပုဂံဘုရားတွေမှာ နံရံဆေးပန်းချီအပြင် ကျောက်စာများ၊ ကမ္ပည်းစာ (မင်စာ)များ၊ အုပ်စီလက်ရာတွေ၊ စဉ့်သုတ်အုပ်ချပ်လက်ရာများ၊ ကျောက်ဆစ်လက်ရာများ၊ အင်္ဂတေ ပန်းတော့လက်ရာများနှင့် စဉ့်ကွင်းလက်ရာတွေ နဲ့ လေ့လာစရာ မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာတွေပါ။
ရှေးပုဂံခေတ်တုန်းက ပုဂံမြို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် နတ်တွေကိုတံခါးအစောင့်အရှောက်အဖြစ်ထားခဲ့တာပါ။ အရင်က မြို့အဝင်တံခါး ၁၂ ချပ်ရှိခဲ့ပေမယ့် ထိုတံခါး (၁၂)ရပ် အနက် အရှေ့မျက်နှာ အလယ်ဗဟိုတံခါး ဖြစ်သည့် သရပါတံခါး တစ်ခုသာ ထင်ထင်ရှားရှား ကျန်ရစ်တော့ပါသည်။ သရပါ ဟူသော အမည်သည် မြားကို ဆီးကာသော တံခါး ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ သရပါတံခါးကိုစောင့်ရှောက်တာကတော့ တံခါးစောင့်နတ် – ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်နဲ့ ညီမ မမြတ်လှတို့ပါ။ သရပါတံခါးမှတစ်ပါး ပုဂံရှိအဆောက်အအုံများသည် စေတီဂူကျောင်းစသော သာသနိက အဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။
ခေတ်တစ်ခေတ်ကို နေ့ရက်တစ်ရက်နဲ့ပြောမည်ဆိုလျှင် အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သားမင်းတို့ရဲ့အချိန်က ပုဂံရဲ့ နေလိုလလို ထွန်းတောက်ခဲ့သည်ဆိုရင် ခရစ်နှစ် ၁၂၈၇ တွင် မွန်ဂိုတို့၏ ကျူးကျော်မှုကြောင့် နရသီဟပတေ့ ပုဂံကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးရခြင်းဖြင့် ပုဂံ၏ဩဇာမှာ လုံးဝကျဆင်းတော့သည်။ နရသီဟပတေ့မင်းနောက်ပိုင်းအချိန်တွေက ပုဂံရဲ့ နေဝင်ချိန်တွေပဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ပုဂံမင်းဆက် ၅၅ ဆက်မြောက် စောမွန်နစ်မင်း (၁၃၂၅ – ၁၃၆၉) တွင်တော့ ပုဂံခေတ်ကုန်ဆုံးလေတော့သည်။
နေဝင်ချိန်တွေတိုင်းက လွမ်းဖို့ကောင်းလှသည်။ မကြာခင် နေဝင်မိုးချုပ်ပြီး အမှောင်ထုက ကြီးစိုးလာတော့မည်။ ပုဂံစစ်သည်တွေကလည်း ပုဂံရဲ့လမ်းတစ်လျှောက် နိုးထလာအုံးမလား?
ဘယ်ညာမောင်နှံကလည်း သာရပါတံခါးကို စောင့်ကြပ်နေတုန်းပဲလား?
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပုဂံသည် မြန်မာတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ ထာဝရ ရှင်သန်နေမည်သာဖြစ်သည်။
1. ဦးဗိုကေ – ပုဂံသုတေသနလမ်းညွှန်
2. မြသန်းတင့် – သမိုင်းထဲက ပုဂံ – ပုဂံထဲကသမိုင်း
4.Thiha, The Traveller